IFTIINKACUSUB.COM: Qisso cajiib ah: Dawooyinkii aan Kudaafadda ku tuuray siday usoo heleen?
Qisso cajiib ah: Dawooyinkii aan Kudaafadda ku tuuray siday usoo heleen?
Iftiinkacusub.com: Maalin maalmaha ka mida ayaan waxa aan booqday gabadh xanuusanaysa oo markaasi ehelka ah,waxa ay ii sheegtay in xanuunka iyada haya ay dhakhtar u tagtay lana kulantay Dhakhtarkii ku shaqada lahaa xanuunkeeda,baadhis ka dibna uu usoo qoray daawadii ku haboonayd.
Waxa kaloo ay sheekada iigu dartay, in aanay dhaman dawooyinkii aanay qaadan marka laga tago laba ilaa sadax Kiniin mooyaane,intiikalana iyada oo isku dhan ayaa waxa ay igu tidhi waxa aan ku guray ama ku daadiyay Kudaafada/Qashinka/Xashiishka.
Intaasi wixii ka danbeeyay maxaa dhacay?maxaase kala qabsaday iyada iyo dhakhtarkii dawada usoo qoray?maxay ayay kala kulantay daawoyinkii ay Kudaafada ku gurtay ee aanay isticmaalin ama aanay cunin?
Wadamadan Yurub waxa ay horumar aan la taaban karin ay ka gaadheen,wada shaqaynta iyo xodhiidhka ka dhexeeya hay'adaha dawlada.Waxaa laga yabaa laba Wasaradood oo aan isku shaqo ahayni in ay hadana leeyihiin xidhiidh wada shaqayneed.
Wadanka Sweden oo xiliyadan aynu ku jirno ay dadka Somalidu aad ugu badan yihiin,ayaa hadana waxa aad moodaa in dadka badan kiisu aanay ka warhayn, xidhiidhka ka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya hay'adaha dawlada iyo sida ay isaga warhayaan,midkastabana ay tan kale siiso wixii macluumad ay uga baahato, ama ay u dirtaba.
Gabadh Somaliyeed ee ay sheekadani ku socoto ,ayaa wadanka Sweden waxa ay soo gashay muddo hadda laga joogo dhawr sanadood.Maalin maalmaha ka mida ,ayay gabadhii waxa ay tagtay dhakhtarka sida aan hore idinku soo sheegay.Waxaanay dhakhtarkii uga sheekaysay sida uu xanuunkeedu yahay iyo meelaha laga qabto.
Gabadhii markii ay dhakhtarkii u tagtay,waxaa lagu sameeyay baadhis aad u dheer,markii la helay xanuunkii ay ka cabanaysay waxa uu yahayna , dhakhtarkii waxa uu u qoray daawadii ku haboonayd xanuunka iyada laga helay,waxaanu u sheegay in dawadaasi ay qaadanayso muddo dhan laba Bilood.
Dawada gabadhan uu dhakhtarku u qoray ,waa daawo qaali ah ,balse kharashka waxaa ka bixinaysa dawlada, madamaa aanay wax shaqo ah aanay haynin,taaso inta badan loo sameeyo dadka bilaa camalka ah.
Gabadhii markii ay dawadii qaadanaysay muddo ku siman sadax casho,ayaa waxa ku adkaatay in ay dawadii sii waddo una qaadato sidii uu Dhakhtarku kula taliyay ,sababta oo ah qadhaadh aad u badan iyo dhadhanka daawada oo sida ay ii sheegtay ay afka saari kariwayday.
Hadaba halkii ay dawada uga celin lahayd dhakhtarkii usoo qoray,kuna wargalin lahayd, ayaa waxa ay samaysay sidii inoo caadada ahayd marka aynu wadankeenii joognay , waxa ay dawadii oo kartoonkeedii ku jirta ,ku tuurtay Kudaafada,kadibna waxaa qaaday sidii u cadada ahayd ,baaburta loogu talagalay in ay kudaafada magalada ka guraan.
Maxay kale ayaa hadana dhacay?
Gabadhii oo sidii isaga xanuusanaysa",ilayn waatan dawadii loo soo qoray iska tuurtaye", ayaa maalin maalmaha ka mida, waxaa boostada waraqaha ugu soo dhacday ,warqad uga timi dhakhtarka ,taasi oo ay ku qoran tahay balan uu dhakhtarkeedu la leeyahay maalin heblaay.
Markii la gaadhay xiligii balanta ayay gabadhii waxa ay tagtay dhakhtarkii,markii ay la kulan tay dhakhtarkii ,ayaa waxa uu waydiiyay cafimaadkeedu sida uu yahay iyo in ay dawadii loo qoray sii loogu talagalay u qaadatay iyo in kale.
Halkii wax kale laga filayay ,ayaa waxa ay ku tidhi dhakhtarkii,""dhakhtaroooow xanuunkaygii wax iska badalay ma jiro,walibana waa uu igusii siyaaday"".Waxa kaloo ay dhakhtarka u sheegtay in ay u baahan tahay daawo kale.
Dhakhtarkii oo la socda in aanay dawadii qaadan,ayaa waxa uu ku celiyay hadal ah"",ma hubtaa in aad dhamaan dawadii wada qadatay"",ilayn Indha-adayg waa la'inagu yaqaanaaye ,waxa ay tidhii ""haaaa waan qaatay dhakhtar, hal-xabana kamaan tagin"".
Dhakhtarkii isaga oo aan dhanna u jeedsan, ayaa waxa uu furay khaanadii miiskiisa, kadibna waxa uu kasoo saaray ,dawadeedii oo aan waxba iska badalin ,sidii ay ku tuurtayna ah,taasi oo laga soo qaaday,xarunta wayn ee la isugu geeyo kudaafada magalada.
Waxa uu tusay dhakhtarkii,qolofkii iyo intii xabbo ee ay ka isticmaashay,waxa kaloo uu tusay in qolofkan uu hayo uu ku qoran yahay magaceeda iyo goobta ay degan tahay,taasina ay cadayn u tahay ayuu yidhi in aadan dawadii qaadan.
Hadaba markii gabadhii beentii ay sheegaysay lagu qabtay,ayaa hadda waxa ay sheegtay runtii iyo sababta ku kaliftay in ay daawada qashinka ku darto,waxa ay uga sheekaysay dhakhtarkii in ay xamili wayday dhadhankii iyo qadhaadhkii faraha badnaa ee ay dawado lahayd,kadibna ay garaadkeeda ka heshay in ay daawada tuurto.
Dhakhtarkii waxa uu u sheegay gabadhii,in ay adag tahay iminka wixii ka danbeeya sida loo aminaa,isaga oo kula taliyay gabadhii,in daawo kasta oo dhakhtarku uu siiyo,hadii ay qaadan kari waydo ,hal xabo oo kiniini ahna ha ahaatee, in ay dhakhtarka kusoo celiso oo aanay ku tuurin goobaha qashinka iwm.
Marka loo eego inaga dhaqankeenii ,arintan oo kale waa wax lala yaabo oo inagu cusub , goobta qashinka ee dawadan laga soo helay waa xarun wayn oo hadii aad aragto inta ay leeg tahay iyo waxa baabuur isugu imanaysa oo qashinkan dhigayso aad layaabayso,hadana waxaa dhacday in qolofkii yaraa ee Kiniinku ku jiray inta laga soo saaro in la horkeeno qofkii ku tuuray.
Gabadhani waxa kaliya ee ay samaysay waxa uu ahaa, caado iyo dhaqan aynu lahayn balse marnaba maskaxdeeda may galin in wadamadani ay ka hormareen dhinaca,maamulka iyo maaraynta dawlada.
marka loo eego dhaqankeenii,maaha wax lala yaabo ,sababta oo ah, inaga daawo kasta oo aad soo iibsato hadii ay cunisteedu ay kugu adkaato,waxa aad ku tuuraysay goobaha kudafada lagu rido,hadii aynaanba wadooyinkaba ku tuurin,ama aanay caruurteenu iyada oo daqadaha guryaha saran aanay cunin,waayo inaga ma jirto dhakhtar aad ku celiso oo kaa qadanaya,nidaamkaasina maaha mid iminka inoo dhisan.
Hadaba waxa aan kula talin lahaa,dadka Somalida ah ,in markasta nidaamkaasi aynu ka barano dadyawgan aynu u nimi,si aynu wadankeena uga dhigno mid horumar la taaban karo ka gaadha dhinaca horumarka iyo dibudhiska dalka.